Nahafoy Tena Izy Ireo: Meksika | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
TENA mampahery ny mahita fa mihamaro ny tanora Vavolombelon’i Jehovah manatsotra fiainana, mba hahafahana manompo bebe kokoa. (Mat. 6:22) Inona ny fanovana ataon’izy ireo? Inona ny olana atrehiny? Diniho ny tantaran’ireo mpanitatra faritany sasany eto Meksika.
“TSY MAINTSY NANAO FANOVANA IZAHAY”
Nivady tamin’ny Janoary 2007 i Dustin sy Jassa avy any Etazonia. Tanteraka ny nofinofin’izy ireo, tsy ela taorian’izay: Nahazo sambo valo metatra latsaka kely izy ireo. Naantson’izy ireo teo akaikin’ny tanànan’i Astoria, any Etazonia, ilay sambo, ary nipetraka tao anatin’izy io izy ireo nandritra ny taona. Tanàna tsara tarehy i Astoria, voahodidina havoana feno ala sy tendrombohitra misy lanezy, ary tsy lavitra ny Oseana Pasifika. Hoy i Dustin: “Nahafinaritra be daholo izay jerena!” Nihevitra izy mivady fa efa nanana fiainana tsotra sady niantehitra tamin’i Jehovah. Tao anaty sambo mantsy izy ireo no nipetraka, niasa tapa-potoana, nivory tany amin’ny fiangonana miteny vahiny, sady nirotsaka ho mpisava lalana mpanampy tsindraindray. Tsapan’izy ireo anefa, tsy ela taorian’izay, fa namita-tena izy ireo. Hoy i Dustin: “Nanamboatra an’ilay sambonay izahay tamin’ny ankamaroan’ny fotoana, fa tsy mba nanampy ny fiangonana. Tsapanay hoe tsy maintsy nanao fanovana izahay, raha tianay ny hanao an’i Jehovah ho loha laharana.”
Hoy i Jassa: ‘Efa nipetraka teto Meksika aho taloha, ary tany amin’ny fiangonana miteny anglisy. Nahafinaritra ahy ny fanompoana teto, ka tena te hiverina aho.’ Namaky tantaran’olona manitatra faritany izy ireo, nandritra ny fotoam-pivavahan’ny fianakaviany, mba hahatonga azy ireo haniry kokoa hanompo any an-tany hafa. Hitan’izy ireo tamin’izany fa namokatra be ny faritany nitorian’izy ireny. (Jaona 4:35) Hoy i Dustin: “Te hahatsapa ny fifaliana tsapan’izy ireo izahay.” Tapa-kevitra hifindra àry izy ireo, rehefa nilaza taminy ny namany teto Meksika hoe misy antoko-mpitory vaovao iray mila fanampiana atỳ. Niala tamin’ny asany izy ireo, nivarotra ny sambony, ary nankatỳ Meksika.
‘NY ZAVATRA TSARA INDRINDRA TEO AMIN’NY FIAINANAY!’
Tao Tecomán i Dustin sy Jassa no nipetraka, rehefa tonga teto Meksika. Mbola akaikin’ny Oseana Pasifika izy io, fa 4 345 kilaometatra atsimon’i Astoria. Hoy i Dustin: “Tsy mba misy tsiotsio-drivotra malefaka atỳ, sady tsy misy tendrombohitra. Migaingaina ny hafanana, ary sahana voasarimakirana no hita hatraiza hatraiza!” Tsy nahita asa koa izy roa tamin’ny voalohany. Tsy nanam-bola izy ireo, ka nihinana vary sy tsaramaso indroa isan’andro, nandritra ny herinandro maro. Hoy i Jassa: “Rehefa nila tsy ho tantinay intsony ilay izy, dia nisy olona nampianarinay Baiboly nanome anay manga sy akondro sy papay, ary harona feno voasarimakirana!” Nahita asa mampianatra teny vahiny amin’ny Internet ry zareo tamin’ny farany, izay any Taïwan no foibeny. Ampy ahazoany izay ilainy isan’andro ny karamany amin’io asa io.
Ahoana no fahitan’izy mivady an’ilay fiainany vaovao? Hoy izy ireo: “Ny fifindranay tatỳ no zavatra tsara indrindra teo amin’ny fiainanay! Lasa nihatsara ny fifandraisanay amin’i Jehovah, ary lasa mifankatia kokoa izahay mivady. Miara-manao zavatra be dia be izahay: Manompo, miresaka ny fomba hanampiana an’ireo olona ampianarinay Baiboly, ary manomana fivoriana. Tsy manahy be toy ny taloha koa izahay.” Hoy koa izy ireo: “Lasa takatray tsara izao fa marina ny Salamo 34:8 hoe: ‘Andramo ka jereo fa tsara i Jehovah.’ ”
ANTONY HANITARANA FARITANY
Rahalahy sy anabavy mpitovo sy manambady miisa 2 900 mahery no manompo any amin’izay ilana mpitory bebe kokoa eto Meksika. Roapolo ka hatramin’ny efapolo taona ny ankamaroan’izy ireo. Ny sasany avy any an-tany hafa, ary ny sasany avy eto an-toerana. Nahoana izy ireo no manao an’io asa sarotra io? Nilaza antony lehibe telo ireo nohadinadinina.
Leticia sy Hermilo
Mba hampisehoana hoe tia an’i Jehovah sy ny mpiara-belona. Hoy i Leticia izay natao batisa tamin’izy 18 taona: “Rehefa nanokan-tena ho an’i Jehovah aho, dia fantatro hoe mila manompo azy amin’ny foko sy ny tenako manontolo. Naniry hampiasa ny fotoanako sy ny heriko hanompoana azy aho, mba hampisehoako hoe tena tiako amin’ny foko manontolo izy.” (Mar. 12:30) Roapolo taona mahery kely i Hermilo (izay lasa vadin’i Leticia), tamin’izy nandeha nanitatra faritany. Hoy izy: “Tsapako hoe ny fanampiana ny olona hifandray amin’i Jehovah no fomba tsara indrindra ampisehoana hoe tia ny mpiara-belona amiko aho.” (Mar. 12:31) Nifindra tany amin’ny tanàna kely àry izy, na dia niasa tamin’ny banky sy niadana tsara aza taloha sady nipetraka tany amin’ny tanàna manankarena atao hoe Monterrey.
Mba hahitana ny tena fifaliana. Niaraka iray volana tamin’ny anabavy mpisava lalana iray za-draharaha i Leticia, taoriana kelin’ny batisany, mba hitory tany amin’ny tanàna mitokana iray. Hoy izy: “Tena variana aho tamin’izay! Faly be aho fa nandray tsara ny olona nitorianay. Rehefa nifarana ny volana, dia nieritreritra aho hoe: ‘Tena izao mihitsy no zavatra tiako hatao eo amin’ny fiainana!’ ” Mitovy amin’izany koa i Essly, anabavy mpitovo 20 taona mahery kely izao. Nihaona tamin’ny mpanitatra faritany maromaro izy, tamin’izy nianatra teny amin’ny lise. Hitany hoe tena mahafinaritra ilay manitatra faritany, ka lasa te hanao an’ilay izy koa izy. Hoy izy: “Hitako hoe falifaly ry zareo, ka lasa tiako koa raha mba mitovy amin’ny fiainan-dry zareo ny fiainako.” Maro koa ny anabavy manao toa an’i Essly. Anabavy mpitovo 680 mahery no manompo any amin’izay ilana mpitory maro kokoa, eto Meksika. Tena ohatra tsara izy ireny, na ho an’ny tanora na ho an’ny antitra!
Mba hananana fiainana mahafa-po sy misy heviny. Nomena vatsim-pianarana hianarana eny amin’ny oniversite i Essly, rehefa nahavita ny fianarany teny amin’ny lise. Nampirisihin’ny mpiara-mianatra taminy izy mba handray an’ilay izy, mba hananana fiainana hoatran’ny olon-drehetra, hono, izany hoe manana diplaoman’ny oniversite, mahita asa tsara, manana fiara, ary mandeha mizaha tany. Tsy nanaraka ny tenin’izy ireo anefa i Essly. Hoy izy: “Maromaro ny namako Vavolombelona nikatsaka an’ireo zavatra ireo, ary hitako hoe lasa tsy zava-dehibe tamin’izy ireo intsony ny tanjona ara-panahy. Lasa variana be nikatsaka ny zavatra teto amin’ity tontolo ity ry zareo, ka nahita olana sy kivy. Izaho kosa te hampiasa ny fahatanorako mba hanompoana tsara an’i Jehovah.”
Racquel sy Phillip
Nianatra asa i Essly mba hahafahany manao ny asan’ny mpisava lalana, ary nifindra tany amin’ny toerana ilana mpitory maika taorian’izay. Nianatra ny fitenin’ny foko otomi sy tlapaneco mihitsy aza izy, na dia sarotra aza izany. Telo taona izy izao no manompo any amin’ny faritra mitokana. Hoy izy: “Tena afa-po aho manitatra faritany sady hitako hoe misy heviny ny fiainako. Ny tena mahafinaritra ahy anefa dia hoe lasa mifandray kokoa amin’i Jehovah aho.” Miombon-kevitra aminy i Phillip sy Racquel, mpivady 30 taona eo ho eo avy any Etazonia. Hoy izy ireo: “Miova haingana be ity tontolo ity, ka maro ny olona matahotra hoe hanao ahoana ny fiainany. Tena misy heviny anefa ny fiainanay, satria manompo amin’ny faritra be olona mandray ny vaovao tsara izahay. Tena mahafa-po ilay izy!”
FOMBA HIATREHANA ZAVA-TSAROTRA
Miatrika zava-tsarotra koa anefa ireo mpanitatra faritany. Anisan’izany ny fivelomana. Raha te ho tafavoaka ianao, dia mila vonona hanao izay asa ilaina eo an-toerana. Hoy i Verónica, mpisava lalana za-draharaha: “Nivarotra hani-masaka aho, tany amin’ny toerana iray nanompoako. Nivarotra akanjo sy nanety volo indray aho tany amin’ny toerana hafa. Izao indray aho manadio tranon’olona sy mampianatra ray aman-dreny tera-bao mba hahay hifampiresaka amin’ny zanany.”
Mety ho sarotra koa ny mizatra amin’ny fombafomba sy kolontsaina hafa, indrindra fa any amin’ny faritra mitokana. Izany no tsapan’i Phillip sy Racquel tamin’izy ireo nanompo tany amin’ny faritra miteny nahuatl. Hoy i Phillip: “Tena hafa be mihitsy ny kolontsain-dry zareo.” Inona no nanampy azy mivady ho zatra an’ilay izy? Hoy ihany i Phillip: “Nifantoka tamin’ny zavatra tsara izahay. Anisan’izany ny hoe malala-tanana izy ireo, tsy mba mihatsaravelatsihy, ary mifandray am-po ny mpianakavy.” Hoy koa i Racquel: “Niana-javatra be izahay rehefa nipetraka tany. Nandraisanay lesona koa ny fiarahana tamin’ireo rahalahy sy anabavy tany.”
FIOMANANA REHEFA HANITATRA FARITANY
Inona no fiomanana tokony hatao, raha te hanitatra faritany? Izao no torohevitra nomen’ireo efa manana traikefa: Dieny izao dia miezaha manatsotra fiainana sy hahay hianina amin’izay misy. (Fil. 4:11, 12) Hoy koa i Leticia: “Rehefa nitady asa aho dia tsy tiako ny nanao asa mety hitazona ahy mandritra ny fotoana ela be. Tiako raha afaka mifindra avy hatrany aho, na rahoviana na rahoviana, ary na aiza na aiza.” Hoy i Hermilo: “Nianatra nahandro sy nanasa lamba ary nipasoka aho.” Hoy i Verónica: “Nanampy tamin’ny fanadiovana trano aho, tamin’izaho mbola niara-nipetraka tamin’ny fianakaviako. Nianatra nahandro sakafo mahasalama sy mora koa aho, sady nianatra nitsitsy vola.”
Amelia sy Levi
Tena manampy koa ny manao vavaka voafaritra tsara. Nahatsapa an’izany i Levi sy Amelia avy any Etazonia, izay valo taona nivadiana. Hoy i Levi: “Nodinihinay hoe ohatrinona ny vola ilainay mba hanompoana herintaona any an-tany hafa, ary nivavaka tamin’i Jehovah izahay mba hanampy anay hahita an’io vola io.” Nahavita nanangona an’ilay vola izy ireo, tao anatin’ny volana vitsivitsy, ary tsy nitaredretra mihitsy nifindra nankany Meksika. Hoy i Levi: “Namaly an’ilay vavaka voafaritra tsara nataonay i Jehovah, ka izahay sisa no nila nanao ny anjaranay.” Hoy koa i Amelia: “Nihevitra izahay hoe herintaona ihany no ho afaka hijanona atỳ. Efa fito taona anefa izahay no tatỳ, ary tsy mieritreritra ny hiala atỳ mihitsy! Tsapanay hoe tena manampy anay i Jehovah atỳ, ary hitanay isan’andro hoe tena tsara fanahy tokoa izy.”
Adam sy Jennifer
Toy izany koa i Adam sy Jennifer, mpivady avy any Etazonia, izay manompo ao amin’ny fiangonana miteny anglisy eto Meksika. Hoy izy ireo: “Aza miandry hoe efa mety be daholo ny zava-drehetra vao handeha. Ataovy antom-bavaka ny fanirianao hanitatra faritany, ary manaova zavatra mifanaraka amin’ny vavaka ataonao. Tsory ny fiainanao, manorata any amin’izay sampana miandraikitra an’ilay toerana tianao haleha, ary rehefa avy mandinika tsara an’izay ho lany ianao, dia mifindrà amin’izay!” * Fiainana mahafinaritra no miandry anao raha manao izany ianao, sady handray fitahiana ara-panahy tondraka ianao!
^ feh. 21 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ilay lahatsoratra hoe “Afaka ‘Miampita Mankany Makedonia’ ve Ianao?”, ao amin’ny Fanompoantsika Ilay Fanjakana Aogositra 2011.
Hizara Hizara Nahafoy Tena Izy Ireo: Meksika